पेट पुट्ट बाहिर नि'स्किएर ल'ज्जित हुनुहुन्छ ? बिहान उठ्नेबित्तिकै गर्नुहोस् मात्र यी काम !
Home जीवनशैली पेट पुट्ट बाहिर नि’स्किएर ल’ज्जित हुनुहुन्छ ? बिहान उठ्नेबित्तिकै गर्नुहोस् मात्र यी...
पेट पुट्ट बाहिर नि’स्किएर ल’ज्जित हुनुहुन्छ ? बिहान उठ्नेबित्तिकै गर्नुहोस् मात्र यी काम !
६ कार्तिक २०७८, शनिबार ०७:१७
१. यदि तपाईलाई पेटको कुनै रो’ग छैन भने बिहान उ’ठ्नेबित्तिकै मनतातो पानीमा कागतीको रस राखेर पि’उँदा पेटको बो’सो घ’ट्छ । यसले मे’टाबोलिजम दु’रुस्त रहन्छ र तौल कम गर्न पनि म’द्दत मिल्छ ।
२. बिहान काँ’चो लसुन खाने बा’नी गर्नुहोस् । यसले शरीरलाई नि’कै फा’इदा गर्छ । बिहान लसुनको दुई या तीन पो’टी च’पाएपछि तातोपानीमा कागती हा’लेर पिउनाले बोसो घ’टाउन म’द्दत गर्छ । यसबाट मो’टोपना घ’ट्ने प्रक्रिया दो’ब्बर हुन्छ । यसबाट शरीरको र’क्तप्रवाह पनि सु’चारु हुन्छ ।
३. खानामा दालचिनी, अदुवा, लसुन र मरिच प्र’योग गर्दा पेट ब’ढ्ने स’म्भावना कम हुन्छ । यसले तपाईंको इ’न्सुलिन क्ष’मता ब’ढाउँछ र चिनीको मात्रा पनि कम गर्छ ।
४. शारीरिक परिश्रमका आधारमा खाना खा’नुहोला । धेरै काम गर्नुहुन्छ भने धेरै खाना ज’रुरत पर्छ ।
५.खाना खाँ’दा उमेरको पनि ख्या’ल गर्नुहोला । ब’ढ्ने उमेरमा खाना को आ’वश्यकता ब’ढी पर्छ । यदि ४० वर्ष पा’र गर्नुभएको छ भने चि’कित्सक वा डा’इटिसियनको स’ल्लाहअनुसार खाना खानु राम्रो हुन्छ ।
६.बिहानको खाना धेरै खादा फ’रक पर्दैन ।
७.खानामा फल र सा’गसब्जी खानुहोस् । बिहान–बेलुकी एक कचौ रा फल र सागसब्जी खानु स्वा’स्थ्यका लागि फा’इदाजनक हुन्छ । यसबाट पेट भ’रिन्छ र एन्टीअक्सिडेन्ट, ख’निज र भि’टामिन पनि प्रा’प्त हुन्छ ।
८. दिउँसो खाजाको रुपमा फलफुल, बदाम, भुटेको म’कै आदि रा’म्रो मानिन्छ । बदाममा भि’टामिन इ तथा प्रो’टिनका अलावा फा’इबरको मात्रा अ’धिक मात्रामा हुन्छ । यसको से’वनले पेट ला’मोसमयसम्म भरिएको अ’नुभूति हुन्छ । यसमा क्या’लोरीको मात्रा ब’ढी भएपनि मो’टाई भने ब’ढाउँदैंन ।
अघिल्लो पोष्टयी हुन् महिलाको पाठेघरमा हुने तीन स’मस्या, सामान्य सोचेर नगर्नुहोस् वे’वास्ता
अर्को पोस्टफर्सीको मुन्टाको तरकारी खाने गर्नु भएको छ ? फर्सीको मुन्टा खानुका फा’इदा